Mira Kutaura Kutarisisa Spans iri Kupera, Ivo HAVANA! | Martech Zone
Chipiri, Zvita 23, 2014 Chipiri, Zvita 23, 2014 Douglas Karr
Isu tinoda zvinonwiwa zvemukati zvakaringana seanotevera munhu, asi ini ndinotenda pane chikuru kusanzwisisika muindasitiri yedu. Pfungwa yekuti nguva yekutarisa iri kudzikira inoda imwe mamiriro akaiswa kwakatenderedza. Kutanga, ini zvachose handibvumirane kuti vanhu vari kushandisa mashoma simba vachizvidzidzisa ivo vega panotevera sarudzo yavo inotevera yekutenga.
Vatengi uye mabhizinesi akashandisa yakawanda nguva vasati vaita tsvakiridzo vachiri kuita tsvagurudzo zhinji izvozvi. Ndakamhanya analytics mishumo kune vese vatengi vedu mukugadzirira iyi posvo uye yega yega yega ine nguva yakakura inoshandiswa papeji uye yakawanda nguva inoshandiswa pachikamu ichienzaniswa ne1 kana makore maviri apfuura. Tiri kuita zvakadzama tsvakiridzo yezviri mukati uye nekuona kudzoka kuri nani pane kudyara zvakadzika zvatinoenda.
Izvo zvachinja haisi nguva yekutarisisa, ndiko kuedza kwakabatanidzwa mukutsvaga zvirimo. Vatsvagidzi vava kuwana hunyanzvi nekukurumidza kuzivisa zvavari kutsvaga. Kana vakasazviona, vanobva. Asi kana vakachiwana, vanoshandisa zvachose nguva yakawandisa kuverenga, kutsvagisisa uye kunyange kuigovana.
Kana yako kambani iri kuona yakanyanya kudonha yakashandiswa munguva papeji kana saiti, zvinogona kunge zviri nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka:
Mazita ako ezvinzvimbo haaenderane nezvako zvemukati. Pamwe urikushandisa nzira dzechikopaiti kukwezva vanhu uyezve izvo zvirimo hazvina kupfuma - izvo zvinoita kuti chero munhu abve!
Wanga uchigadzirira zviri zvisizvo zvemukati. Kuva neako saiti yako yawanikwa yetoni yemakiyi musanganiswa iwe usina simba mairi kunogona kuwedzera yako bounce mitengo uye kudzikisira nguva yakashandiswa pane yako saiti. Nyora pane zvinangwa - nguva dzese!
Wanga uchikurudzira kuburikidza zvisina kukodzera zvakabhadharwa zvakabhadharwa zvekutsvaga mushandirapamwe. Vese vashanyi vatsva kune yako saiti vangangoshandisa nguva shoma kupfuura vanhu vanodzoka. Kuvhura mishandirapamwe kunogona kuderera panguva panzvimbo saiti sevashanyi vatsva vanowana (kana kusawana) zvavanoda.
Iwe hausi kuisa mari mune zvemukati marongero anotyaira zvakadzama kubatikana - senge infographics, mharidzo, ebook, whitepapers, kesi zvidzidzo, zvipupuriro, anotsanangura mavhidhiyo, maturakiti ekudyidzana, nezvimwe.
Zvinotakurika zvemukati haisi zano rekuendesa nekuti kutarisisa matani ari kudzikira (havasi!). Zvinotakurika zvirimo zvidimbu zvechingwa zvinotungamira vanhu kune yako saiti pane akakodzera misoro kuitira kuti vawane kwakadzika kubatanidzwa pane ruzivo rwavari kutsvaga.
Ndingakupikise kuti umhanye ongororo yekushandurwa uye nguva pane peji kana saiti uye iwe uchaona izvo zvemukati zvinoshandura zvichiri zvemukati-zvemukati zvemukati. Ongororo yepuraimari, mapepa machena, zvidzidzo zvemakesi uye zvakadzama, ruzivo-rwakapfuma blog mablog anoramba achityaira tani yekuita uye zvinotungamira kukutendeuka.
Kuvandudza yako content marketing strategy Zvinofanira kusanganisira kuvaka zvemukati pamatanho akasiyana ekubatana kuitira kuti, mutengi kana bhizinesi zvanyanya kufarira, vanogona kunyura zvakadzika mukutsvaga kwavanoda.
Zvinotakurika zvirimo zvine nzvimbo yazvo, asi hazvisi zvenguva pfupi kutariswa. Izvo ndezve kushoma kwekuedza uye vateereri vakawandisa kukwevera vashanyi zvakadzika! Kuri kututisa mvura uku chirauro chaicho chakamirira kumberi kune chako chinangwa.
Uine izvo mupfungwa, iyi infographic kubva kuOracle ine imwe nzwisiso yakanaka kune isingagone kurongwa zvemukati marongero.
Tags: infographicpangataurasnackable zvemukatinguvanguva iri papejinguva panzvimbonguva yakashandiswa muchikamunguva yakashandiswa papejinguva yakashandiswa panzvimbo
Ndinozorodzwa kunzwa kuti vashanyi vewebhu vari kushandisa nguva yakawanda vachidzidza mapeji emutengi wako kupfuura zvavaive makore 1 - 2 apfuura. Munyika yanhasi yekurira kurira, izvo zvinoratidzira zvakanaka kune isu isu tinotenda mukudyara nguva yekugadzira inofungisisa, yakanyatso tsvagiswa zvemukati!
Izvi zvinopenya! Ndiri kufara kwazvo kukosha kweruzivo-rwakapfuma, rwemafomu mafomu harina kuderera.
Ndinozvida kana mumwe munhu akaita chirevo chakasiyana uye chakashinga chinopokana nemafungiro akakurumbira